Ny eva miendrika faribolana no famantarana ny fanadiovana matihanina, atao maina na amin’ny rano araka ny haro nanaovana ilay lamba. Ny fanadiovana matihanina dia mampiasa tsora mpadevona biôlôjika na avy amin'ny rano. Samihafa araka izany ny etikety ho an'ny fanadiovana matihanina maina sy amin'ny rano.
Ny litera ao anaty faribolana no milaza ny fomba fanadiovana ny lamba.
Fanadiovana matihanina maina
Lazaina hoe maina ny fanadiovana satria miditra sy mivoaka maina ny milina ny lamba diovina kanefa mandalo tsora simika mpandevona izay manadio sy mandaitra kokoa noho ny tsora fandio any an-tokantrano.
Ny fanadiovana maina dia natao ho an’ny lamba marefo notenonina tamin’ny kofehy tsy mahazaka rano, toy ny kofehy avy amin’ny biby na tsy voajanahary.
Ny litera ao anaty faribolana no milaza amin’ny matihanina amin’ny fanadiovana ny karazana tsora simika mpandevona azo ampiasaina.
Ny tsipika eo ambanin’ny faribolana no milaza ny fepetra arahin’ny matihanina amin’ny fanadiovana. Ao anatin’izany ny hodina, ny mari-pana, ny fanamainana, na ny harihitry ny tsora fanadiovana
Fanadiovana maina amin’ny perklôretilena, tsy misy fepetra manokana. Mila fitandremana ny fampiasana fanalana tasy misy tsora mpandevona. Tsara ihany anefa ny manandrana amin’ny faritra kely mialoha ny tena fanadiovana.
Fanadiovana maina amin’ny perklôretilena, ferana ho malefaka ny hodina, ny hamandoana, ary ny mari-pana. Mila fitandremana ny fampiasana fanalana tasy misy tsora mpandevona. Tsara ihany koa ny manandrana amin’ny faritra kely mialoha ny tena fanadiovana.
Fanadiovana maina amin’ny tsora mineraly. Tsy misy fepetra manokana. Tsy mampiasa fanalana tasy misy tsora mpandevona
Fanadiovana maina amin’ny tsora mineraly. Ferana ho malefaka ny hodina, ny hamandoana, ary ny mari-pana. Tsy mampiasa fanalana tasy misy tsora mpandevona
Tsy azo diovina amin'ny fomba matihanina maina (tsy azo ampiasana tsora mpandevona).
Voasokajy eto ny lamba miendrika hoditra ( simili) na vita amin'ny kofehy PVC (toy ny akanjo entina amin'ny fanatanjahan-tena) na koa akanjo misy ravaka perla.
Fanadiovana matihanina amin’ny rano
Mitovitovy amin’ny fanadiovana any antokan-trano ihany ny fanadiovana amin’ny rano ataon’ny matihanina saingy mitaky fomba manokana eo amin’ny fanasana, fanakobanana, ary famiazana ny lamba, ary koa ny fampiasana akora fanadiovana sy simika hafa mba hitandremana ny lamba.
Ny fepetra ilaina amin’ny fitaovan’ny matihanina sy ny fikaliana eo amin’ny famaranana ny fanadiovana araka izany dia tsy ahafahana mampiasa ny milina fanasana any an-tokantrano.
Fanadiovana matihanina amin’ny rano, tsy misy fepetra manokana.
Ny lamba mahazaka rano dia azo diovina matihanina, indrindra ireo tsy antonona milina fanasana any an-tokantrano toy ny lambam-baravarana sy lambam-pandriana.
Fanadiovana matihanina amin’ny rano. Ferana ho malefaka ny hodina.
Natao ho an’ny lamba marefo sy mora simba
Fanadiovana matihanina amin’ny rano. Ferana ho tena malefaka ny hodina. Natao ho an’ny lamba tena marefo sy mora simba
Tsy azo diovina matihanina amin’ny rano.
Mila fitaovana sy fepetra manokana ny fanadiovana matihanina amin'ny rano ny akanjo vita amin'ny hoditra na volombiby
Ny eva(*) izay nadika eto dia ireo izay fampiasa matetika ary iombonan’ny firenena maro, kanefa mety misy eva hafa sy manokana araka any lalàna sy fandaminana ao amin’ny firenena tsirairay.
Toromarika ankapobeny ireo voalaza ireo fa ny mpanamboatra milina, indrindra ny milina avo lenta mahavita fanasana sy fanadiovana karazany maro sy sarotra, dia manome fanazavana fanampiny amin’ny fampiasana ny milina. Toy izany koa, ny mpanao ny savony na vovoka sy ranoka fanasan-damba dia manoro ny fomba fanasana sy fanadiovana araka ny tokony ho izy, indrindra eo amin’ny hafanan’ny rano mba tsy handaniana angovo.
ahantony mahazo rivotra ny lamba vao avy nodiovina tamin'ny fomba matihanina maina fa tsy ampiasaina avy hatrany. "Mampiaina" ny kofehy izany ary manala izay mety ho fofona tavela koa.;
alefaso miaraka diovina amin'ny fomba matihanina ny akanjo ambony sy ambany (palitao sy pataloha ohatra) mba tsy hisy fahasamihafana ny lokony
Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET)
Fanadiovana vola maloto
Pejy teo aloha: Fipasohana